Nehemiya Anovakazve Masvingo eJerusarema | Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Munguva yakararama Ezra, kwaiva nemumwe muIsraeri ainzi Nehemiya uyo aiva mushandi waMambo Atashasta. Nehemiya aigara muguta rePezhiya rainzi Shushani. Mukoma wake akauya kubva kuJudha nemashoko asingafadzi ekuti: ‘Vanhu vakadzokera kuJerusarema havana chinovadzivirira. Masvingo eguta nemagedhi aro zvakaparadzwa nevaBhabhironi hazvisati zvavakwazve.’ Nehemiya akashungurudzika. Aida kuenda kuJerusarema kuti anobatsira vanhu, saka akanyengetera kuti mambo amubvumire kuenda.
Pava paya, mambo akaona kuti Nehemiya akanga asiri kufara. Akabva ati: ‘Handisati ndambokuona wakadai. Chii chiri kunetsa?’ Nehemiya akati: ‘Ndingatadza here kusuruvara kana guta rangu, iro Jerusarema, riri dongo?’ Mambo akamubvunza kuti: ‘Chii chaunoda kuti ndikuitire?’ Nehemiya akabva angonyengetera chinyararire, ndokuti: ‘Ndinokumbirawo kuti mundibvumire kuenda kuJerusarema kunovakazve masvingo eguta racho.’ Mambo Atashasta akamubvumira kuenda, uye akava nechokwadi chekuti Nehemiya aizofamba akachengeteka parwendo rwake rwainge rwakareba. Akaitawo kuti Nehemiya ave gavhuna weJudha uye akamupa matanda ekugadzirisa magedhi eguta.
Nehemiya paakasvika kuJerusarema, akaongorora masvingo eguta racho. Akabva aunganidza vapristi nevatongi achibva ati: ‘Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinofanira kutotanga basa.’ Vanhu vakabvumirana nazvo, vachibva vatanga kuvakazve masvingo acho.
Asi vamwe vavengi vevaIsraeri vakatanga kuvatsvinyira vachiti: ‘Kana gava rikazendamira masvingo amuri kuvaka anodonha ayo.’ Vanhu vakanga vachishanda havana kumbozviteerera, asi vakaramba vachivaka. Masvingo acho akaramba achisimba uye achikura.
Vavengi vakaronga kuti vauye vachibva kumativi akasiyana-siyana, kuzorwisa Jerusarema vanhu vasingafungiri. VaJudha pavakazvinzwa, vakabva vatanga kutya. Asi Nehemiya akati: ‘Musatya. Jehovha anesu.’ Akabva aisa varindi kuti vachengetedze vanhu vaishanda, saka vavengi vakanga vasingachakwanisi kurwisa.
Mumazuva 52 chete, masvingo nemagedhi eguta zvakanga zvapera. Nehemiya akaita kuti vaRevhi vese vauye kuJerusarema kuzopemberera kupedza kuvaka kwavakanga vaita. Akavaronga kuti vave mapoka maviri evaimbi. Vakabva vakwidza nepamasitepisi epaGedhi reTsime vakananga pamasvingo eguta, ndokutenderera guta racho, vamwe vachienda nekuno vamwe nekoko. Vakaridza hwamanda, makwakwakwa esimbi neudimbwa, uye vakaimbira Jehovha. Ezra akaenda nerimwe boka, uye Nehemiya akaenda nerimwe racho, vachibva vazonosangana kutemberi. Vanhu vese​—varume, vakadzi nevana—​vakapa zvibayiro kuna Jehovha uye vakapemberera. Manzwi ekufara kwavaiita akasvika kure kure.
“Hapana chombo chakagadzirirwa kukurwisa chichabudirira.”​—Isaya 54:17
Mibvunzo: Nei Nehemiya akaenda kuJerusarema? Kuvakazve masvingo eJerusarema kwakatora nguva yakareba sei?
Kusuma Bhuku raNehemiya
Bhuku raNehemiya rine zvidzidzo zvinokosha kuvanamati vechokwadi mazuva ano.
Nehemiya Kadhi reBhaibheri
Zvakaitwa naNehemiya zvinotidzidzisa kuti tivimbe naMwari pazvinhu zvose.
Dzidza nezvaNehemiya woona kuti akabatsirwa sei kuti akunde vanhu vaimupikisa.